La tashiga dadweynaha ee ku aaddan hannaanka doorashada qof-iyo-codka ah – GMDQ
La tashiga dadweynaha ee ku aaddan hannaanka doorashada qof-iyo-codka ah
GMDQ oo ka ambaqaadaya qiyamkiisa iyo qorshihiisa istratijiyadeed wuxuu si joogta la tashi ula sameeyaa dadwaynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddaba. Ujeeddada la tashiga ayaa ku dhisan in si wadajir ah looga shaqeeyo talana looga yeesho sidii looga gudbi lahaa caqabadaha doorasho qof iyo cod ah ee dalka ka hirgasha.
Billowgii sannadkan 2018 Guddigu wuxuu ku dadaalay inuu gaaro degmooyinka dalka ee suurto galka ah iyo qurba joogtaba. wuxuu wadatashiyo ku qabtay magaalooyin ay ka mid yihiin:
Dawlad Goboleedka Dawlad Goboleedka Dawlad Goboleedka
· Dhoobley – Koonfur Galbeed
· Wallawayn – Puntland
· Balcad – Galmudug
· Galkacyo Bulshada Somaliland ee ku nool muqdisho
· Banadir Qurbajoogta Kenya Qurba joogta UK & USA
Qaybaha guddigu uu la tashaday waxaa ka mid ah:
Mas’uuliyiinta dawladda ee degmada
Hoggaanka dhaqanka iyo Culimaa’uddinka
Dhalinyarada, Haweenka iyo Aqoonyahanka.
Guddigu ayaa ku qabtay degmo kasta 3 ilaa 4 kulan oo ay ka soo qayb galaan 70 – 100 qof kulankiiba. Sidoo kale guddigu wuxuu dood cilmiyeed u qabtay aqoon yahanka iyo siyaasiyiinta kaas oo si toos ah uga baxayey telefishinnada dalka.
Waxuu guddigu si toos ah ula kulmay in ka badan 6000 qof oo isugu jira dhallinyaro, odayaal iyo haween oo ka kooban qaybaha bulshada kuwaasoo ka soo qayb galay 60 kulan oo ka dhacay gudaha dalka iyo 12 kulan oo lagu qabtay dalka dibaddiisa. Waxaa sidoo kale guddigu latashi la yeeshay siyaasiyiin kala ah golayaasha barlamaanka, xukuumadda iyo dawlad goboleedyada
Xogtii laga aruuriyay dadwaynaha ee ku saabsanayd caqabada doorashada ayaa lagu muujiyay Jaantunskan hoos ku xusan isagoo tilmaamaya caqabadaha mudnaanta koowaad leh in la wajaho xallintooda.
Dadwaynaha waxay soo jeediyeen in la wajaho caqabadda amniga iyagoo ku tilmaamay in ay ka tahay 30% caqabadaha doorashada ka hor iman karta. Waxayna ku xijiyeen siyaasadda, miisaaniyadda, sharciyada, musuqmaasuqa iyo ugu dambayntii heerka wacyiga bulshada sida ku xusan jaantusan.
Waxaa la faafiyey September 24, 2018 October 28, 2018